Kedu ka m ga - esi mara ma m na - anya ụgbọ ịnyịnya? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Overtraining ịgba ígwè - pragmatic ngwọta
Kedu ka m ga - esi mara ma m na - anya ụgbọ ịnyịnya?
Ọ bụrụị na-amalite inwe ụra ehighị ụra nke ọma, abalị ehi ụra, ma ọ bụ teta na-enwe mmetụta nke ike gwụrụ karịamgbe oleị lakpuo ụra, ọ nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama na ị na-azụ oke ike. Ọ bụ ezie na a gwakọtara nchọpụta ahụmaotu ụbọchị mgbalị siri ike na-emetụta ụra, o doro anyana overtrainingna-emetụta ụra.Ọkt 13 2015
Obere teknụzụ, gravel ma ọ bụ n'okporo ámá, yoga, Star Wars. Ihe a niile na ndị ọzọ n’izu a, Jụọ GCN ihe ọ bụla. Nke mbu, banyere mbido mmalite, ajụjụ a sitere na Wijtze Valkema, daalụ maka ịkpọtụrụ anyị.
Ugbu a Wijtze jụrụ, sị: 'Gịnị ka ị ga-enye ndụmọdụ? 'Ọ bụrụ na m chọrọ inwe mmetụta nke ịbụ onye dabara adaba na njem ọ bụla, nwere obere teknụzụ na akụrụngwa dị ka o kwere mee?' Nke a bụ ajụjụ na-enye ume ọhụrụ, n'ihi na o doro anya na egwuregwu anyị emepegoro nke ọma na nghọta anyị banyere physiology ma si otú a na-azụkwa ọzụzụ, mana enweela oke ọganiihu site n'echiche nke teknụzụ, ya bụ na mmepe nke ihe nlere obi, GPS isi nkeji na, na nso nso a, mita ike.
Mana echere m na ọ dị ezigbo mkpa na site n’oge ruo n’oge ọ dị ezigbo mkpa na m na-eme ya n’onwe m. Gaa ebe ahụ na igwe kwụ otu ebe gị ma belata ihe ndị dị mkpa. Ọ dị ka nnọkọ Na-anụ ụda.
MTV Kwupụrụ, ma na igwe kwụ otu ebe. Gaa ma ụgbọala dị ka mmetụta gị si dị, emela atụmatụ ụzọ ma hapụ ngwa gị niile na gizmos n’azụ gị ma ọ bụ gbanyụọ igwe ike anyị. Echere m na ị ga-ahụ ya ka ọ nwere nnwere onwe.
Nwere ike ịzụ dị ka ike ma ọ bụ dị nfe dịka ịchọrọ. Na ị maara ihe? Ọ ga-akwalite mmụọ gị. Ma ọ bụ ọ pụrụ ọbụna mkpọtụ. - Ma Simon, ndị ọsụ ụzọ ahụ ejighi kọmputa, nwunye.
Ana m enwe kaadị mgbe niile. Echegbula onwe gị banyere nke ahụ. Nri.
Ebee ka anyị nọ? Anyị ga-ama ụlọikwuu maka abalị a. - Ipswich - Mba anyị anọghị n’Ipswich. Oh yeah, bịaruo nso nso.- Swindon.- Anyị nọ nso Swindon.- Ee, nke ahụ bụ akụkọ mara mma ikwu obere.- Na-esote anyị nwere ajụjụ a si OVN 1211 ma ọ bụ oven 12-11. #torqueback, kedu ọkwa kachasị mma, cyclocross, gravel ma ọ bụ igwe ịgba ọsọ? 'Anọ m na-agba ịnyịnya obere oge ugbu a, dị ka ọtụtụ n'ime unu ga-ama, m ga-ekweta na ọ bụrụ na m malitere egwuregwu ugbu a, na-enweghị ọtụtụ ahụmịgba ịnyịnya, ekwesịrị m ikweta na obosara igwe na obosara dị na-agbagwoju anya iji bụrụ eziokwu.
Ya mere ndụmọdụ m ga - eji bụrụ ihe mbụ ị ga - eme iji mata ụdị ịkwọ ụgbọala ị ga - eme. Yabụ, ị ga-apụ n'okporo ụzọ? You ga na-ejegharị n'okporo ụzọ ma ọ bụ n'okporo ájá ma ọ bụ n'okporo ụzọ? Ọ bụrụ na ị na-eme nke ahụ ugbu a nke ga - eme ka ịhọrọ gị ọtụtụ mfe. Banyere ajụjụ gị gbasara igwe kwụ otu ebe, ndụmọdụ m ga - abụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbago cyclocross nweta onwe gị igwe kwụ otu ebe.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịtụle igwe eji ajị ajị agbaji ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe. Bikegba ọsọ ịnyịnya ibu na-adịkarị mfe ma sie ike ịkọwa. Mana nke ahụ bụ ihe anyị na-achọ ime n’isiokwu a ebe a, yabụ enwere m olile anya na ọ na - enyere aka. - Ọ bụrụ na ị nwere mmetụta na m nwere obere obi abụọ banyere ịnyịnya Allroad, mgbe ahụ i kwuru eziokwu.
Yabụ, m ga - eme Si ihe a na - akpọ epic ride n'okporo ụzọ m mgbe Matt na Si na - agba Ridley X-Trails ọhụrụ ha. Ha dị ka ịnyịnya ígwè ịgba ọsọ, mana na nwechapụ maka taya sara mbara, ntakịrị nkwụsi ike, ịdị irè, na otu Sram drivetrains maka ntụkwasị obi. - I kwutere ya.
Ugbu a bụ oge maka ngwa ọkụ ọkụ. Nke mbụ anyị nwere nke ahụ sitere na Irvin Gillert na Twitter. 'Adị m afọ iri na abụọ n'afọ a, ewepụtara m ihe mgbaru ọsọ nke ime otu puku kilomita ma emeela m 250 kilomita.' M na-emega ahụ gabiga ókè? ihe dị ka otu ọnwa bụ ọzụzụ dị oke mkpa, mana ndụmọdụ m nyere gị, Irvin, echere m na otu puku kilomita kwa afọ ga-emezu maka onye ọgbọ gị.
Naanị ijide n'aka na ị ga-ezu ike, mana nke mbụ bụ naanị ịnụ ụtọ ịnya ịnyịnya ígwè gị, nke ahụ si, nke ọma, Agaghị m ekwu aha ahụ n'ihi, banye ya. 'Hey GCN, biko kpọọ m Ty. 'Daalụ nke ukwuu. 'N'ihi na amaara m na aha m siri ike ịkpọ aha m.' N'ikwu okwu niile site na agwaetiti Caribbean nke Trinidad, chọrọ ịma ma ọ bụrụ na ị na-azụ ma na-agba ọsọ n'otu ụkwụ, ka ha na-enweta ndị ọhụụ agbụrụ niile? Iso ya? 'Ọ dị mma, iji zaa akụkụ ikpeazụ nke ajụjụ gị, ee, ị nwere ike n'ezie ịgba ọsọ ma zụọ ụgbọ ịnyịnya carbon gị, ọ bụrụ na ị nwere ụkwụ nwere ụkwụ, ọ na-abụkarị echiche dị mma ịnya na wiilị ọzụzụ, ị ga-echekwa ihe kachasị mma gị anyi ls maka oso.
M na-azụ ma na-agba ọsọ na ọgba tum tum m abụọ. Mana uru, ee, ha nwere ntakịrị ndụ karịa dabere na otu otu. Ma imirikiti ndị na-agba ịnyịnya nwere ịnyịnya ígwè ma na-azụkwa ụgbọ ịnyịnya pụrụ iche.
Na-esote anyị nwere nke ahụ site na MarkiMint, aha na-adịghị mma. 'Daalụ maka ịjụ ajụjụ m.' 'Ndi Dan, Matt, Simon na Tom nwere ike ịza?' Kedu emume ị tupu agbụrụ gị? Ememe ahụ tupu agbụrụ ahụ, enweghị ike ikwu maka Tom na Si, na-enweghị ajụjụ na-etinye aka nri m na sock ekpe m mgbe niile.
Mgbe ahụ aka nri m na akpụkpọ ụkwụ aka ekpe m. Na mgbe niile ị na-a aụ iko kọfị. Nke ahụ bụ ya.
Ihe na-esote bụ nke Matthew Schreiner. 'Echetara m ibi na ọzụzụ dị ka onye na-eto eto ọkachamara na Boulder, Colorado, Motorola's Chris Carter' na onye otu ya gafere m obere mgbago nke si Estes Park. Mgbe m gbara afọ iri abụọ na otu, achọpụtara m na m nwere ọtụtụ ọrụ m ga-arụ iji ruo ogo ya.
Adị m ugbu a chocolatier na Chicago o. Naanị ihe masịrị m bụ na ọ bụ obere akụkọ. Nke ahụ bụ ya, enweghị ajụjụ banyere ya.
Naanị akụkọ. N'ebe ahụ, obere akpa. N'ikpeazụ, Phill Whitlam's. ”Matt bụ onye dara ogbenye dị ka ọ saa ahụ́ ma dịkwa njikere maka ụra. 'Nke ahụ dị na edemede yoga. 'Onye nlekọta ya', onye nkụzi yoga, kwuru, 'Were bụ ezigbo nwatakịrị, Matt?' 'Ọ bụrụ na ị mere nke ọma, ị nwere ike igwu Chewbacca.' Gosi ụmụ okorobịa otú usoro. 'Jisie ike n'ezi ọrụ.' Mgbe ahụ, laghachi ọsọ nkịtị na ajụjụ a sitere n'aka Youri Jansen na ngalaba nkọwa: 'Ndewo ụmụ okorobịa, enwere m ezigbo anyaụfụ ịhụ na unu nwere ọmarịcha' njem dị iche iche 'Mba. 'Ugbu a, m na-eji ụgbọ ala m na igwe kwụ otu ebe n'azụ m iji nyochaa igwe mba. Biko ị nwere ike ịnye m ndụmọdụ ole na ole maka etu esi ebufe igwe kwụ otu ebe na ngwongwo gị mgbe ị na-eme njem site na ikuku na kọntaktị, Youri.
Ị nwetere ya. Ọ bụ nnukwu ihe ùgwù na echere m na ọ ga-adị mma ịsị na maka anyị niile ndị na - eme mgbanwe ebe a, ana m ekwu, ọ bụ nnukwu ihe ùgwù ileta mba ebe anyị na - eme .Ọ ga - abụrịrị ihe onye ọ bụla n'ime anyị anaghị eleda anya.
Otu ihe ahụ bụ maka ịdebe anyịnya igwe anyị, igwe kwụ otu ebe dị ebube anyị, na ọnọdụ dị elu mgbe anyị na-aga mba ọzọ. Ugbu a enwere m ntakịrị ihe omume na ọ na-ewe ihe dị ka nkeji iri anọ na ise. Ugbu a, m belata nke ahụ ruo minit 10-15, mana ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị na-emetụbeghị mbụ, enwere ọtụtụ ihe ị ga-atụle ga-amalite ma nyere gị aka. - Ogologo njem gị na ebe ị na-eme atụmatụ ikpuchi ga-ekpebi ego ole ị ga-achọ.
Gị igwe kwụ otu ebe gị njem na njide nke ugbo elu na ya mere ma: a. Ọ na-echebe akpa ma ọ bụ igbe ịnyịnya ígwè gị, ị nwere ike iji igbe kaadiboodu, anyị nwere isiokwu na-egosi gị otu esi esi igwe kwụ otu ebe na nhọrọ atọ a. Ya mere lelee ya - Ugbu a, anyị nwere ajụjụ a si MA n'izu a na Jụọ GCN Ihe ọ bụla, m ga-akpọ ya Ma maka ọdị mfe. '# Torqueback ma ọ bụrụ na m chọrọ itinye wider taya na igwe kwụ otu ebe m' Ọ dị mma dabara a wider taya na azụ maka amara nkasi obi? Ka enwere iwu edeghị ya? Ajuju di egwu banyere okwu a, obu ezie na ejiri m n’aka na ufodu n’ime unu ekwenyeghi na ngalaba okwu, mana aga m ekewa ajuju a na okara.
Nke mbụ, m mere nke ahụ. Ihe dị ka afọ ise ma ọ bụ isii gara aga, na enwere asọmpi okporo ụzọ siri ike na UK nke a na-akpọ Melton CiCLE Classic nke nwere ụzọ na ụzọ egwu, anyị na-agagharịkwa n'ọhịa. Na ọdịiche dị na igwe kwụ otu ebe m na-agba ọsọ.
Enweghi ike inweta 25 na azụ ka m wee nwee 23 na azụ na 25 n'ihu nke bụ ọgwụgwọ zuru oke, mana tupu m etinyere igwe kwụ otu ebe ahụ, m gụrụ n'ezie na Tom Boonen mere ihe yiri nke ahụ Paris-Roubaix na Paris-Roubaix Mụbaa nkasi obi Echere m na o nwere 28 na ihu na 25 na azụ. Yabụ, ikwu eziokwu n’ezie, ọ bụrụ na ọ dị mma maka Tom B oonen, ọ ga-ezuru gị. Ya mere, gaa n'ihu.
Ọ dị mma, maka ntakịrị ihe na rim na obosara taya, lelee edemede a site na Simon. Ọ bụ ihe na-atọ nnọọ ụtọ. (Egwú Club) - Ugbu a, otu n'ime ihe ndị na-adọrọ mmasị, kamakwa uru kachasị dị mkpa bụ na taya buru ibu na-emepụta nkwụsị na-enweghị atụ.
Ugbu a o siri ike ikwu ihe kpatara ya. Anyị nwetara eziokwu a n'ezie n'ihi na data na-agba ume na-adịkarị n'ahịa ruo oge ụfọdụ - nke ọma, Jụọ GCN Ihe ọ bụla fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu ahụ. Daalụ maka ajụjụ gị niile ma biko gaa n'ihu site na iji hashtag Torqueback ma na ngalaba dị n'okpuru ma ọ bụ na mgbasa ozi.
Iji jide n'aka na ị gaghị echefu ihe ọzọ Global Cycling Network isiokwu, denye aha na ọwa. Ọ bụ n'efu. I nwere ike ime nke a site na ịpị ụwa.
Ugbu a bụ otu esi eme ule FTP na Johnny Bevan, pịa ebe a, yana maka GCN na John Degenkolb Challenge, pịa n'okpuru na onye ọ bụla meriri.
Kedu ihe ịrịba ama 4 nke overtraining?
Ihe ịrịba amana mgbaàmà nkeọrụ
Iri oke nri. Ndị na-ebuwanye ibu na-ejigide usoro ọzụzụ ọzụzụ siri ike nwekwara ike belata calorie.
Soreres, nje, na mgbu.
Na-emebiga ihe ókè.
Mbelata agụụ na ọnwụ.
Iwe na obi ilu.
Ọrịa na-adịgide adịgide ma ọ bụ mgbu ahụ ike.
Guzo na arụmọrụ.
Yabụ na ị na-arụ ọrụ. Nke ahụ dị mma. Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime ihe ọma a nwere ike ịbụ ihe kachasị njọ ị na-eme mgbe ị gbalịrị inweta ahụ ike ọzọ.
Gịnị na-eme ụmụ okorobịa? Jeff Cavaliere, ATHLEANX.COM Ọtụtụ ihe dị mma nwere ike bụrụ ihe ọjọọ. Ma abia na ike iku ume o nwere ike buru ihe kacha njọ.
Karịsịa mgbe ị na-agbalị ịzụlite ahụ ike. Ndi mmadu, etinye m ihe ndekọ a ma gwa gị na mgbatị gị dị mkpụmkpụ mana ọ bụ nnukwu igodo iji nweta nsonaazụ. N'ihi gịnị? N'ihi na ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na-eche na ndị ka mma, na n'ihi nke ahụ, ha overtrain.
Ugbu a ụfọdụ n'ime gị nwere ike ịnọdụ ala ebe ahụ na-agagharị, oh chere, anụrụ m na ịghachị anaghị adị na YouTube, ma ọ bụ na enwere otu nwoke n'ụlọ mgbatị m nke kwuru na Btra. Nke a bụ BS kachasị ukwuu ị nụrụ n'ihi na m ga-agwa gị na ọ bụ nnukwu nsogbu ndị mmadụ na-eche ihu ụbọchị ndị a na-emega ahụ. Ihe m na-ekwu bụ ụmụ okorobịa na-ebuli n'enweghị enyemaka nke ihe ọ bụla, anyị makwaara ihe nke ahụ bụ.
Ọ dị mma, ndị mmadụ na-ewere steroid, ụmụ okorobịa na-a drugsụ ọgwụ ọjọọ. Nke a abụghị ihe anyị na-ekwu. Guysmụ okorobịa a nwere ikike ịmegharị ahụ.
oakley flak 2.0 xl nyocha
Mana ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ịchọrọ ịme, n'ezie, jiri ike mgbake gị iji weghachite mgbatị gị. Laghachi ike karịa oge ikpeazụ. Iji mee nke ahụ, ịkwesịrị ịkwalite, ọ bụghị ibibi.
Ọ DỊ MMA. Kpalie mmụọ, ọ bụghị ibibi. Aga m agwa gị, iji kpalie, enwere opekata mpe ọgwụ.
Ya mere aga m ezute ntakịrị, e nwere otu nwoke aha ya bụ Mike Mincer onye na-arụ nnukwu ọrụ ọzụzụ ogologo oge gara aga, ka anyị kwuo na otu setịpụrụ bụ ihe ịchọrọ. Otu usoro nke ike ziri ezi, ruo n'ókè nke ọdịda, ezuola iji kpalite uto ahụ. Ma mgbe ahụ ịkwesịrị ịpụ na mgbatị ahụ ka ị nwee ike ịhapụ ahụ gị izu ike ma gbakee ma wughachi.
Ọ bụ ya mere anyị ji ekwu ọtụtụ okwu banyere sle ep na ihe niile ahụ na mpụga mgbatị ahụ n'oge na-adịbeghị anya. Maka na ihe ị na-eme ebe a dịkwa mkpa. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị m ugbu a, m ghọtara.
Nke a ga - abụ obere ezumike ebe a maka ụmụ okorobịa a gwara m na ị kwesịrị ịzụ otu awa, elekere na ọkara, ma ọ bụ abụọ. Ka anyị dịkarịa ala were ndị a dị ka ihe mbụ iji mee ma ọ dịkarịa ala chọpụta ihe ga-ekwe omume. Chọpụta na ihe m na-ekwu bụ eziokwu.
Maka na m na-agwa gị kpamkpam, ọ bụ ihe ga-agbanwe etu ị si emega ahụ. Ọ ga-agbanwe nsonaazụ ndị ị hụrụ. N'ihi ya, achọrọ m ịkọwa ụfọdụ ebe ndị ọzọ n'isiokwu a.
Kọwaa nke a nye onwe gị, ịdọgharịrị adị. Nke kachasị dị obere dị na ihe niile anyị na-eme. Echere m, gịnị kpatara na anaghị m egosi gị ụfọdụ ihe atụ iji mee ka echiche ahụ nke ọma na nke a bụkwa ikpe ebe a na mgbatị ahụ.
Na ngwụcha, anyị ga-ejikọ ya na ụzọ ụfọdụ ị ga - esi jide n'aka na ị na - enweta mkpali zuru oke. Mana ị naghị eme ya dị mkpụmkpụ, mana n'otu oge ahụ, ị ​​doro anya na ị naghị eme ya. Ka anyị lee otu ihe atụ ebe a.
Ekwurula m banyere ihe ndị gbara anyị gburugburu kwa ụbọchị, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, n'ebe nile. Ikpughe ìhè anyanwụ. Ọ dị mma, enwere obere ọgwụ dị irè.
Mgbe ị na-apụ n'anyanwụ na-achọ inweta tan. Enwere ọtụtụ ikpughe anyanwụ, ọ dị mma, ị na-enweta ọrụ site na thelanin na akpụkpọ ahụ anyị iji gbanwee agba. Nri, na mgbe anyi gbanwere agba enwere onodu ebe anyi ga enweta ezigbo ngosi.
nchekwa igwe kwụ otu ebe
Nke a bụ tan anyị. Mana kwa sekọnd ọ bụla, n'ụzọ nkịtị kwa sekọnd mgbe nke ahụ gasị, ihe niile anyị na-eme bụ ịga n'ihu na mbibi n'ime anwụ, ntachu, nke abụghị ihe dị mma. Yabụ, ị kwagara site na mkpali na-achọsi ike gaa na nsonaazụ na-adịghị mma.
Ọzọkwa, ọkụ, tan, e nwere ezi akara ebe a n'etiti ihe ọma na ihe ọjọọ. Ọ dị mma, ihe atụ nke abụọ. Agaghị m ekwe ka unu na-ele m aka ebe a ogologo, ụmụ okorobịa.
Mana ebe a ị nwere ike ịhụ oku, ịkpọ oku, obere ntanime n'ime obere mkpịsị aka. Ọ na-abịa site na ịnwụchi ogwe ndị ahụ gnarled anyị niile na-eji ebuli. Gịnị kpatara ha ji adị? Maka na ha na-achọ inyere anụ ahụ anyị aka ịta ahụhụ ka anyị nwee ike mebie anụ ahụ ọ bụla.
Ime nke ukwuu na kedu ihe ị ga-enweta? Get nweta ọnya. Ya mere ndi mmadu, ogwu ogwu kachasi mee ka aru di nma. Ọtụtụ ihe dị mma na-aghọ afụ.
N'okwu ahụ ọzọ, DamageOkay, ọ bụrụ na ị bụ onye mmụta anya, ka anyị bido na atụ ọzọ. N'ebe a n'ihu m ụmụ okorobịa, anụ atọ. Ọ dị mma, anyị nwere nke a na-agaghị eri eri, kpamkpam akụrụ.
Anyị nwere nke esichara ọfụma nke ọma, ọ masịrị otu ị masịrị steak gị, mana ọ na-esiri ya. Ma mgbe ahụ, anyị nwere otu ebe a na-charred, ok, overdone. Nke a bụ nnukwu nnọchi anya nke ihe na-eme mọzụlụ anyị mgbe anyị na-emega ahụ.
Ọzọkwa, n'okpuru ọzụzụ, ị naghị arụsi ọrụ ike, ị naghị emega ahụ ma ọlị. Are bụ obere anụ. Ọ bụ ezie na ị bụghị dible ma ị gaghị ahụ nsonaazụ ọ bụla.
N'akụkụ nke ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, ị na-akụbiga ọrụ ike gabiga ókè, ị na-emebiga ihe ókè, anụ ahụ akụrụngwa ahụ anaghịzi eri ọzọ. N'ihi gịnị? Maka na agbaala ya kpamkpam, ị nweghị ike ịta ya n’ime ya, nke ahụ bụ mmebi, nke ahụ mebiri emebi akwara, nke ahụ akwara, ma ọ dị, na nke ahụ agbajiri. Ma ọ bụrụ na ị na-emega ahụ nke ọma, ị nwere ike iri nri ibe anụ ahụ, ọ na-atọ ụtọ nke ọma ma ọ na-arụ ọrụ ahụ, ihe ikpeazụ ị na-ahụ ụmụ akwụkwọ na-ahụ anya.
Ka anyị kwuo na isi na-awa gị. Kedu ihe ị ga-eme? O yikarịrị, ị ga-agba ọsọ gaa kọlọtọ ọgwụ wee jide ihe maka ya. Ọ dị mma, ya mere họpụta ụdị akara ịchọrọ, mmadụ abụọ ga-ezuru iji nweta ọrụ ahụ, ma ọ bụ Ma ihe na-eme mgbe mmadụ abụọ ma ọ bụ ihe gbanwere iri isii na abụọ.
Gịnị na-emezi? Enwere m ike ịgwa gị na isi ọwụwa nwere ike ịla. Ọtụtụ nsogbu kachasị njọ na aka gị. Maka na ị ga-anọ n’ọnọdụ mberede.
Y’oburu n’inwe obi iru ala ghara inwu. Rig ht, mgbe a bịara n’ihe banyere ị medicationụ ọgwụ, e nwere n'ezie otu ọgwụ dị irè ma, ọzọ, na-emerụ gị ahụ. Anyị maara nke a.
Ọ dịghị iche mgbe anyị na-ekwu maka ọzụzụ. Have nwere ọgwụ kachasị dị irè, ị gafere ya wee bido mebie. Ya mere, ihe m chọrọ ime ugbu a bụ ịgwa gị na e nwere ụzọ ị nwere ike isi lekwasị anya iji hụ na ị ga-ezuru mkpali a.
Ma lezie anya ka ị ghara imebiga ya ókè ma ọ bụ ruo ebe ị gafere ahịrị ahụ ma metụta nsonaazụ ịchọrọ n'ezie. Ok, ugbua gini ka anyi kwesiri ime iji dozie nsogbu a? Kedu ka anyị ga - esi hụ na anyị mere ya nke ọma ma anyị emeghị ọtụtụ? Ndị mmadụ, ọ na-agbadata ịzụ ahịa ike maka ogologo. Ọ bụrụ na ị na-azụ maka ịtachi obi mọzụlụ ugbu a, ọ bụrụ na ị na-azụ maka egwuregwu ntachi obi.
Nke a bụ ụdị ọrụ mgbatị dị iche, anyị na-ekwu maka ịzụ akwara. Ma ọ bụrụ na ị na-agba mbọ iwulite ahụ ike, nke a bụ opekempe kachasị dị irè, nke ahụ bụ ihe anyị chọrọ. Ya mere, anyị ga-amụbawanye ọzụzụ anyị.
Belata ogologo ọzụzụ anyị. Ugbu a ụfọdụ ndị nọ ọdụ ebe ahụ ọzọ, enweghị m ike ikwere na ọ na-ekwu na nkeji 40 ezuola. Nkeji 40 ezuola maka na ị ga-azụli ike.
Ok olee otu anyi nwere ike isi kọwaa nke ahụ. Ka anyị kwuo na ị bụ onye okomoko na mgbatị ahụ, enwere sekọnd 45 na ahịrịokwu. Anyị ekpuchiwo nke a tupu oge a, ọ nwere ike ịbụ na ọ dịghị ebe ọ bụla? Na nso nke ahụ.
Ọ bụrụ n ’iwere oge gị n’oge etinyere gị, ị ga - anọ n’etiti 22 na 23 sekọnd. Kwesịrị ibili dị ka nke a site na ị na-ebelata nwayọ, ị na-eche na ị kwughachiri ya. Mgbe ahụ, ka anyị kwuo na ị nwere ezumike nke abụọ nke 60 na anyị na-enyekwa gị sekọnd 15 ka ị gbanwee, n'agbanyeghị na ị kwesịrị iji ezumike 60 nke abụọ gị kwadebe maka usoro gị ọzọ.
Nke ahụ bụ 2 nkeji kwa set, mma abụọ Nkeji na set, ya mere ọ bụrụ na anyị mere 20 tent, 20 tent nke a mgbatị, anyị ka ga-adị 40 nkeji. Kedu ihe ị na-eme, ọzụzụ maka nkeji iri itoolu? “Olee otu ị ga-esi zụọ ma ọ bụrụ na ị naghị azụ ya? Dị ka m kwuru, ị nọrọworị na 23 sekọnd na ahịrịokwu. Yabụ ọ bụrụ na ịnọ na sekọnd 23 na ahịrịokwu, gịnị ka ị na-eme? Enwere m ike ịgwa gị ihe ị nwere ike ime.
N'ihi na m na-ahụ ya na mgbatị ahụ oge niile. Nọ na ekwentị gị n'etiti etiti na-anwa ịchọta nwa agbọghọ n'ụlọ mgbatị ahụ. Ihe ọ bụla ị mere ụmụ okorobịa, ọ baghị uru maka ịkpụ akwara.
Yabụ ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ọgwụ a, enwere otu ihe ị ga-emere m. Bido inwe ịhụnanya n'echiche nke ịmụba mmega ahụ gị. Mee ka eccentrics a sie ike niile ị nwere ebe a.
Zụọnụ ọdịda. Zuo ike ma zuru ike n'etiti udiri. Laghachi ma mee ya ozo.
Ndị mmadụ, ị nwere ike ịzụ ọzụzụ siri ike ma ọ bụ zụọ ogologo oge, mana ị gaghị eme ha abụọ Ọ bụrụ na ị zụọ ike, ịkwesighi ịzụ ogologo. Nke a bụ ihe ATHLEANX gbasara. Ọ dị mma, ọ bụ itinyekọta otu akwara ọnụ.
Ka i wee nwee ike iji akwara mee ihe dịka o kwesiri, ị zụọ nke ọma karịa ma belata mmebi ahụ. Dịka m kwuru, otu akwara na-azụkọkọ ọnụ. Ma mgbe ahụ n'ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ ka anyị wee banye, rụọ ọrụ ahụ, pụta, zuru ike, laghachite karịa ma sie ike ma hụ nsonaazụ ngwa ngwa.
Ndị mmadụ, nke ahụ bụ ọzụzụ dị ka onye na-eme egwuregwu maka echiche, gbalịa. N'ihi na enwere m ike ịgwa gị otu ihe, ọ bụrụ na ị na-emebiga ihe ókè, ị ga-aga n'ihu na-enweta nsonaazụ ndị ị nwetara nke nwere ike ọ gaghị eju gị afọ. Gịnị mezie? Ha chọrọ ka ị laghachi ma hụ nsonaazụ ya.
Ọzọkwa, zube maka ọgwụ kachasị dị irè. Will ga-ahụ ihe ọ dị ka ịghara ịna-emebiga ihe ókè. Ndị mmadụ, anyị ga-ekpuchi nke a n'ụzọ miri emi site na isiokwu ọzọ ga-abịa, mana ọ bụrụ na ịchọta nke a nyere aka, ma ọ bụ opekata mpe anya mepee anya, hapụ okwu gị n'okpuru wee mee ka m mara, ọ bụrụ na ugbu a ị bụ na-achọ mmemme nke ga-adịrị gị zụrụ nke ọma mana azaghị ọzụzụ na mpaghara ebe a na-akụzi ọrụ, nke dị mwute ikwu na ọ gbasaa.
Gaa na ATHLEANX.COM wee bido ịhụ etu osi adị. Ndi be anyi, a ga m echighachi n’ime ubochi ole na ole.
Olee otú m ga-esi kwụsị ọrụ m na-arụ mgbe m na-agba ígwè?
Nweta oge ndina dị oke mma. N’izu nke abụọ, nwaa ịnya ụgbọ ịnyịnya dị mfe mana naanị ma ọ bụrụ na ọ dị gị mma karịa. Jiri nyocha obi iji nọrọ n'okpuru pasent 80 nke max. Mgbe izu abụọ a gbalitere iji nwayọọ nwayọọ maliteghachi ọzụzụ nkịtị — ma ọ bụrụ nanị na agụụ na-agụ gị ịgba ịnyịnya.
Egwuregwu ịgba ole ka karịrị?
M ga-asị na onye ọ bụla na-agba haigwe kwụ otu ebeisii ma ọ bụ asaa ugboro n'izu nwere ike ịnyanke ukwuu. Onye nke ozo bu obi obi. Ratezọ obi gị na-ewere. Ọ bụrụ na ị na-agbasi mbọ ike ka obi gị gbagoo dị ka o kwesịrị, nke ahụ bụ ihe ngosipụta doro anya na ike gwụrụ gị ma nwee ezumike ụbọchị. '12bọchị 12 2020
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - agagharị n’ụbọchị niile
Mgbeịgba ígwèna-akpali ma na-emeziwanyenke giobi, ngụgụ na mgbasa, na-ebelatanke giihe ize ndụ nke ọrịa obi.Cygba ígwèna-ewusinke giakwara obi, na-eme ka izu ike izu ike na-ebelata ogo abụba ọbara.
Tragwọ ọrụ ọ na-adịgide adịgide?
Gbabawanyekarịrị nanị ike ọgwụgwụ, ịgba ọsọ nke ọma, na imerụ ahụ́. OTS nwere ike ịkpata mgbanwe a na-apụghị ịgbagha agbagha na sistemụ ahụ ọtụtụ, na-akpatana-adịgide adịgidegbanwere ọ bụghị naanị ikike ịgba ọsọ, mana ogo mmadụ niile nke ndụ na-adịghị agba ọsọ.
Cycgba ịnyịnya ígwè awa abụọ n’ụbọchị ọ karịrị akarị?
Ọtụtụ mgbe,ịgba ígwèugboro abụọ aụbọchịọ bụghịnke ukwuu.Ọtụtụndị na-eme egwuregwu na-azụ ọzụzụ ugboro abụọ aụbọchịọ dịghịkwa ihe kpatara yandị na-agba ígwèịdị iche. Ihe ndị dị mkpa bụ oke olu na ike jikọtara ya na ahụike n'oge ọ bụla. Naọtụtụikpe,ịgba ígwèugboro abụọ aụbọchịpụrụ ịba nnọọ uru.18 nke Ọkt 2018
Cycgba ígwè elekere 1 kwa ụbọchị dị mma?
Cygba ígwèotuaka elekerekaụbọchịmaka ọnwụ ọnwụ bụ ụzọ magburu onwe ya iji bulie ọnwụ. Onye dị otu narị na iri abụọịgba ígwèmaka iheaka elekereke ufọt ufọt osisi ọkụ banyere 650 calories. Ọbụnaịgba ígwèNkeji 30 aụbọchịanọgide na otu afọ nwere ike ọkụ ihe karịrị 100,000 calories na-ebute ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30 pound nke ọnwụ.Jul 25. 2020bọchị 2020
Kedu ihe ọrịa overtraining pụtara maka onye na-agba ịnyịnya?
Ọrịa Overtraining (nke a na-akpọkarị OTS), isi ihe na-eme ka ahụ nwee mmebi n'oge mmega ahụ karịa ka ọ nwere ike idozi, bụ ezigbo nchegbu maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè-ọkachasị ndị nwere ebumnuche dị elu.
Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - agagharị ụgbọ ịnyịnya gị?
Ọ bụ ezie na ezigbo mgbawa na igwe kwụ otu ebe nwere ike ịmịpụ ahịhịa nke ụbọchị nrụgide na-arụ ọrụ, eme ọtụtụ oge ị na-agbakwunye n'ezie na nrụgide ahụ gị na-arụ kama 'nrụgide busting'. Ọ bụrụ na ịnweghị mkpali iji zụọ ụgbọ ịnyịnya ígwè gị, gbalịa ụfọdụ ọzụzụ maka mgbake uche.
Gịnị ka ọ pụtara mgbe ahụ gị gabigara ọrụ?
Vertgbasapụ bụ ọnọdụ anụ ahụ na nke mmụọ ma ọ bụ nke mmetụta uche. Ọ bụ ahaghị nhata n’etiti ọzụzụ na mgbake, mmega ahụ na mmega ahụ. 'Mmetụta ọzụzụ' bụ nzaghachi ahụ maka nrụgide ọrụ. Ọ bụrụ na nrụgide dị oke oke, ahụ enweghị ike ịzaghachi ma gbanwee. Ostrapụ nwere ike ịpụta.